नेपाल चल्लामा पनि परनिर्भर, साढे ६५ करोडको चल्ला आयात – NewsAgro.com
नेपाल चल्लामा पनि परनिर्भर, साढे ६५ करोडको चल्ला आयात
April 3, 2018 newsagro0Comments Agriculture, Newsagro.com, चल्ला, नेपाल चल्लामा पनि परनिर्भर, साढे ६५ करोडको चल्ला आयात
यो समाचार 55 पटक पढिएको
चितवन । कुखुरा उत्पादनमा झण्डै आत्मनिर्भर बनेको नेपाल कुखुरा उत्पादन आवश्यक पर्ने चल्लामा भने परनिर्भर छ । नेपालमा वार्षिक एक होइन, १० होइन, ६५ करोड ५६ लाख मूल्यबराबरको एकदिने माउ चल्ला आयात हुने गरेको छ । लेयर्स माउ चल्ला अमेरिका र जर्मनीलगायत मुलुकबाट र ब्रोइलर माउ चल्ला श्रीलंका, थाइल्याण्ड, मलेसिना, भारत, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकबाट आयात हुँदैआएको छ ।
वार्षिक एक लाख १२ हजार लेर्यसको माउ चल्ला र १२ लाख ब्रोइलरको माउ चल्ला नेपाल भित्रिने गरेको पोल्ट्री विज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । लेर्यसको प्रति चल्लाको मूल्य ७.५ यूरो र ब्रोइलरको प्रति चल्ला मूल्य ४.५ डलर पर्न आउँछ । यसरी हिसाव गर्दा ५६ करोड १६ लाख ब्रोइलरको माउ चल्ला र ९ करोड ४० लाख लेर्यसको माउ चल्लाखरिदमा जाने गरेको छ ।
एकदिने चल्ला हवाइजहाजबाट मगाइने र ७२ घण्टाभित्र नेपाल आइपुग्ने विज्ञ डा। भट्टराईले बताए । चिक्स बक्सका हालेर चल्ला ल्याउने गरिन्छ । ‘एकदिने चल्ला खान नपाएपनि केहीदिनसम्म सहजै बाँच्न सक्छ, बढि दिनको ल्याउँदा मर्ने सम्भावना हुनाले एकदिन चल्ला नै ल्याउने गरिएको हो’ डा. भट्टराईले भने ।
लेर्यसको चल्लाले २० हप्ता पालेपछि ८० हप्तासम्म मात्रैं अण्डा दिन सुरु गर्दछ भने, ब्रोइलरको चल्लाले २४ हप्ता पालेपछि ६४ हप्तासम्म मात्रैं अण्डा दिने गर्दछ । ‘यो समयपछि अण्डा त दिन्छ तर प्रोडक्टिभिटी घटेर जान्छ नयाँ चल्ला हाल्नुपर्ने हुन्छ’ डा. भट्टराईले भने, ‘ब्रोइलरमा अझैं बढी मात्रामा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ ।’ नेपालमा १९५ वटा हृयाचरी उद्योगले एकदिने चल्ला आयात गर्ने गरेका छन् ।
चितवनमा र नवलपुर क्षेत्रमा मात्रैं १ सय हृयाचरी उद्योग छन् । नेपालमा एकदिने चल्लाका उत्पादन गर्न नसकिने विज्ञ डा. भट्टराईले जनकारी दिए । ‘पियोर लाइन, जिजिपी, जीपी र प्यारेन्ट बनाउने प्रविधि हामीसँग छैन, भारत लगायतका देशहरुले पनि एकदिने चल्ला आयात नै गर्ने हुन।’
डा. भट्टराईले भने, ‘चीनले जीजीपी, भारतले जीपीसम्मको टेक्नोलोजी एडप्ट गरेका छन् ।’ नेपालको कव नेपाल भन्ने हृयाचरीले जीपीसम्मको प्रविधी अपनाएपनि त्यति सफल भने भएको छैन ।
← कृषिका कस्ता एजेण्डा प्राथमिकतामा
सहकारीमार्फत तीन खर्ब परिचालन →
अमेरिका बस्ने चिकित्सकको नाममा फर्जी स्वास्थ्य पत्र जारी